Shiinaha warshad wax soosaarka warshadaha iyo alaableyda | Gelken
Kolajka warshadaha waa polypeptides, dipeptides iyo amino acids adag oo ay soo saaraan hydrolysis iyo nabaad-guurka kolajka.
Borotiinkeena warshadaha waa collagen fasalka quudinta, sidoo kale waa kolajka xayawaanka, kaas oo inta badan loo isticmaalo quudinta xayawaanka ee kala duwan si loo wanaajiyo nuxurka borotiinka loona kordhiyo nafaqada.Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa koronto-dhalinta, ku darida qalabka dabka, iwm.
Qaabka wax soo saarka: budada cad ama budada huruudka ah ee khafiifka ah, fududaanta in lagu milmo biyaha, si fudud loo nuugo qoyaanka, ka dib marka la nuugo qoyaanka isku xidhka adag.
Waxyaabaha kiimikada ah: Polypeptides, dipeptides iyo amino acids adag oo ay soo saaraan harolysis iyo nabaad guurinta kolajka. Waxay leedahay wadaagga borotiinada.
Wadarta nitrogen: ka sarreeya 10.5%, qoyaan ≤5%, dambaska ≤5%, wadarta fosfooraska -0.2%, chloride ≤3%, borotiinka ka sarreeya 80% .PH: 5-7.
Heerka Imtixaanka ： GB 5009.5-2016
Waxyaabaha Faahfaahinta Natiijada Imtixaanka
Barootiin （% ， saamiga beddelka 6.25） 95% 96.3%
Qoyaanka (%) ≤5% 3.78%
Dambas (%) ≤10% 6.70%
Qaybaha aan milmi karin .1 0.6
Bir culus Pp100ppm <100ppm
Kaydinta: Ku hay meel qabow oo qalalan, heerkulka 5ºC ilaa 35ºC.
Hore: Kaabsal adag oo faaruq ah
Xiga: Xayawaanka Collagen